धनगढीको मेयर जितेका हमाल :: सविता बुढा :: Setopati
धनगढी, जेठ ८
धनगढी उपमहानगरपालिका-१५ उर्मीका ७० वर्षीय हरि चौधरीसँग देशमा भएका चुनावमा धेरै पटक मतदान गरेको अनुभव छ।
संघीयता लागू भएपछि पाँच वर्षअघिको चुनावमा उनले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई भोट दिएका थिए। तर पाँच वर्षमा उनी धनगढीका जनप्रतिनिधिबाट खुसी हुन सकेनन् र यसपालि स्वतन्त्र उम्मेद्वार रोजेर भोट दिए।
उनैले भोट दिएका गोपाल हमालले धनगढीको मेयर जिते।
‘आँप’ चुनाव चिन्हबाट उठेका हमालले २६ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएर विजयी भए। उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नृप वडले १४ हजार ८ सय १७ मत मात्र पाए।
धनगढीको मेयर बन्ने सपना पुरा गर्न गोपाल हमाल पाँच वर्ष अघि पनि चुनाव लडेका थिए। त्यतिखेर उनलाई वडले नै हराए।२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावपछि समर्थकले कुनै दलमा प्रवेश गर्न वा आफैंले क्षेत्रीय दल खोल्न सुझाव दिए। त्यसपछि उनी विवेकशील साझा पार्टीमा आवद्ध भएका थिए।
उनी पार्टीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक भएर काम गरे। पार्टी प्रवेश गरेको चार वर्षपछि उनले विवेकशील साझा छोडिदिए।
मतदाताको सुझाव अनुसारै विवेकशील साझा पार्टी त्यागेको उनी बताउँछन्। मेयर बन्ने सपनामा पार्टीकै कारण ब्रेक लाग्ने सुझाव पछि उनले पार्टी छोडेर स्वतन्त्र उमेद्वारी दिए।
भारी मतान्तरले जितेका हमालको धनगढीमा मेयर बन्ने सपना पुरा भएको छ। अब उनीप्रति धेरै मान्छेको आशा छ।
उनलाई चुनावमा भोट हालेका हरि चौधरी अब धनगढीको विकास हुनेमा ढुक्क छन्।
‘मलाई लाग्छ, पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव जिते आफ्नो पार्टीलाई हेर्ने रहेछ। स्वतन्त्रले भने जनतालाई हेर्छ, यसपालि भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने मान्छेले मेयर जितेकोमा म खुसी छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अब धनगढीको विकास हुन्छ कि भन्ने विश्वास छ।'
जनताले गरेको यही विश्वासमा अबका दिन हमालको परीक्षा हुनेछ। हमाल भने आफू सधैं धनगढीबासीको हितका निम्ति काम गरेकाले गाह्रो नहुने बताउँछन्।
को हुन् हमाल
हमालको पुर्ख्यौली घर कपिलवस्तु भए पनि बाबु बाजेको पालादेखि नै कैलालीमा बस्न थालेका हुन्। धनगढीमा झाडी, जंगल फाँडेर मान्छेहरू बस्न थालेपछि हमाल परिवार पनि कपिलवस्तुबाट यता सरेको थियो।
उनीहरू सुरूमा साविकको मनिकापुर गाविस, हालको टीकापुर नगरपालिकामा बसाइ सरेका थिए। सामान्य खेती–किसानी र पशुपालन गरेर उनीहरूको जीविका चल्थ्यो।
‘पछि बुबा पढ्न भनेर सल्यान जानुभयो। त्यहाँ पढ्दै, शिक्षक पनि हुनुभयो,’ हमालले आफ्ना बुवाबारे सुनाए,’पछि वन विभागमा जागिर भएपछि धनगढी फर्किनुभयो।’
बुवाको धनगढीमा सरूवा भएपछि हमालको परिवार यतै बस्न थाल्यो। धनगढीको वनदेवी नजिक डेढ कठ्ठा जमिन किने र त्यही जग्गामा सानो घर बनाए। बुवाको कमाइले ६ जना सन्तानको खर्च ठिक्क हुन्थ्यो।
हमाललाई सानैदेखि व्यवसायमा रूची थियो, कहिले काम गर्न सक्ने होउँला भन्ने लाग्थ्यो रे। भन्छन्, ’म कहिले जवान हुँला अनि काम गरूँला भन्ने सोच्थेँ।’
जब उनी जवान भए, धनगढीको कैलाली बहुमुखीमा क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषयमा प्रविणता तहको पढाइ सकेर व्यवसायमा लागेका थिए।
‘सुरूमा गौरीफन्टाबाट सामान ल्याएर धनगढीमा बेचेँ,’ हमाल भन्छन्, ‘पछि पाँच हजार रुपैयाँ सापटी लिएर टिनको बाकस बनाएर बेच्ने कामबाट व्यवसायमा अघि बढेँ।’
उनले व्यवसाय बढाउँदै लगे। अहिले त उनी सुदूरपश्चिमका नामी व्यवसायी भएका छन्। उनको व्यवसायमा धेरै जनाले रोजागरी पाएका छन्।
उनले व्यवसायको पनि विभिन्न क्षेत्रमा हात हाले। होटल, सञ्चारलगायतका व्यवसायमा सफल हुँदै जाँदा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पनि भए।
हमाल व्यवसायी मात्रै होइनन्, समाजसेवी पनि हुन्। उनले धनगढीमा कपडा बैंक र शववाहन सञ्चालन गरेका छन्। ‘सुन्दर सुदूरपश्चिम’ अभियान अन्तर्गत उनले गरेका केही काम प्रशंसित छन्।
अहिले उनलाई त्यसैको फाइदा पनि भयो। उनी आफैँ पनि यहाँका धेरै परिवारसँग आफू जोडिएकाले यतिधेरै मत पाएको बताउँछन्।
‘झण्डै ३९ सालदेखि अहिलेसम्म व्यवसाय गर्दा धेरैले काम गर्न पाए। हामी व्यवसायमा काम गरेका कयौं मान्छे सफल उद्यमी समेत भएका छन्। मैले सिकाएको तेस्रो पुस्ता बजारमा छन्,’ उनले भने ‘मलाई अहिले जित्न सजिलो भएको पनि त्यसैले हो।’
व्यवसायसँगै उनी सामाजिक क्षेत्रमा पनि जोडिए।
केही समस्या परे अफ्ठ्यारो पर्दा आफूकहाँ आएका मानिसलाई खाली हात नपठाएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले विगतदेखि अहिलेसम्म गरेका कामका कारण मानिसमा एक किसिमको विश्वास भयो। आफ्नो लागि भन्दा पनि समाजका लागि काम गर्छन् सोचे। समाजका लागि काम गर्ने मान्छेलाई जिताए जनतालाई पनि सहज हुने विश्वासका साथ मलाई जनताले भारी मत दिएको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘धनगढीको बजारमा मलाई सबैले चिनेको थियो। ग्रामिण एरियामा मलाई नचिनेको ठाउँ पहिलाको निर्वाचन भन्दा राम्रो माहोल पाए। पहिला चिन्न सकेनौं। तपाई यस्तो पार्टी भन्दा माथि उठेर एक मत हामी तपाईलाई दिन्छौं भन्नुहुन्थ्यो।’
धनगढीबासीले मत दिएर आफ्नो काम पुरा गरे अब उनको परीक्षा सुरू भएको छ। उनले भने परीक्षा भन्दा पनि आफ्नो धनगढी बनाउने सपनालाई यो जितले थप ऊर्जा दिएको बताए।
निर्वाचित भएपछि उनले पहिलो काम सचिवालय व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। सचिवालयले योजना बनाउने छ। कार्यालपालिकाले निर्णय गर्ने उनले बताए। उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक ढाँचालाई पारदर्शी, जनमुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उनले बताए।
मेयरले मात्रै चाहे पनि भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने उनको दावी छ ।
‘मुल सफा भयो भने पानी सफा आउँछ, मेयरले कसैको एक रूपैयाँ खादैन भने कर्मचारीले खान सक्दैन,’ उनले भने।
आफूले पदभभार ग्रहण गरेपछि तत्काल सम्बोधन हुने समस्या र प्राथमिकताका आधारमा विकासका काम गर्ने उनको भनाइ छ।
धनगढी सहरको विकासको दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ आफू अघि बढेको हमालको भनाइ छ।
’२० वर्षपछिको धनगढीको विकासको गन्तव्य के हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक कस्तो हुने? भन्नेबारे म लक्ष्य निर्धारण गरेर अघि बढेको छु। मलाई यहाँको कुलोखोलो सबै थाहा छ,’ उनले भने।
धनगढीलाई डुबान मुक्त र पर्यापर्यटन अनुकूल हुने गरी विकास गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको हमालको भनाइ छ। त्यसबाहेक अर्कों हो सार्वजनिक शौचालय र पार्क वा खुला ठाउँ।
‘अहिले धनगढीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने जमिन छैन, स्वास्नी मान्छेलाई गाह्रो छ, लोग्ने मान्छे किनारतिरै लाग्छन्,’ हमाल भन्छन्, ‘भूकम्प वा कुनै विपत्ति आइहाले मानिसहरूलाई राख्ने सार्वजनिक ठाउँ छैन।’
धनगढीमा अहिले सुकुम्बासी लगायतको समस्या छ। एक पुस्ता लालपुर्जा पर्खदैँ बित्न लागेको बताउँदै हमालले अब यो समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने बताए।
आफ्नो धनगढी मोडलमा उपभोगका वस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता, डुबान नियन्त्रण लगायत मुख्य पक्ष रहने उनको भनाइ छ।
आफू नगरप्रमुख निर्वाचित भएपछि सरकारी गाडी, सरकारी हवाई टिकट, भत्ता र तलब नलिने उनले पहिले नै घोषणा गरिसकेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘म मेयर भनेको यस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाउन चाहन्छु, मेयरको काम के हो देखाउन चाहन्छु।’
धनगढी सहरको भौतिक विकास योजनाबद्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘यहाँ अहिले भएका सडक उहिल्यै खुलेका हुन्। आफ्नो मनले बस्ती विकास भयो। सरकारले केही गरेन। यहाँ जनसंख्या बढेको छ, विकासको सम्भावना धेरै छ तर सहरको स्वरूप आएन।’
आफू स्वयंसेवक मेयर भएको उनको भनाइ छ।
‘यस्तो बेन्चमार्क बनाउने हो कि जसले गर्दा भोली आउने मेयरका क्यान्डीटले दलहरुले पनि कमसेकम यो काम गर्न सक्ने मान्छे आउनु पर्छ। अब हिजो चाँहि पार्टीमा दुःख पाएको, योगदान गरेका भरमा मात्रै धनगढीलाई जिम्मा लगाउने परिपाटी थियो। यो परिपाटी चेन्ज हुनुपर्छ’ उनले भने।
अब विकासमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कम से कम हिजो भन्दा माथि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हिजो स्कुल, स्वास्थ्य यस्तो थियो, मेरो पालामा भयो भन्ने देखाउँछु। जनताले हिजो भएका क्रियाकलापसँग हामी सन्तुष्टि छैनौं भन्ने संन्देश दिएकोले हामीले काम गरेर देखाए भोलि दलहरूलाई पनि राम्रो सन्देश हुने छ। स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्नेलाई पनि उदाहरण हुनेछ,’ उनले भने।
कतिपयले कार्यपालिकामा राजनितिक दलबाट आएकाहरू पनि हुने भएकाले आफूले सोचे अनुसार काम गर्न उनलाई गाह्रो हुने बताइरहेका छन्। तर उनलाई भने त्यस्तो लाग्दैन।
‘चुनाव जितेर आउने सबै काम गर्न आउने हो, राजनीति गर्न होइन, सबैले धनगढी बनाउने भनेर जनतालाई भनेका छन्। मैले राम्रो काम गर्न खोजे कसैले रोक्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने, ‘खराब नेतृत्व भए पो जसले पनि विरोध गर्ने हो। राम्रो काम गर्न त सबैले साथ दिन्छन् भन्ने लाग्छ।’
संविधानमा मेयरका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका सम्बन्धि अधिकार, दायित्व प्रष्ट भएकाले कसैले रोक्ने छेक्न सक्ने भन्ने उनलाई लागेको छैन।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ८, २०७९, ०५:४५:००
दुई देशका लागि राजदूत नियुक्त
यी हुन् रवि लामिछानेको पार्टीका २१ केन्द्रीय सदस्य
बलात्कारको उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउन २१ सांसदको संशोधन प्रस्ताव